Muunad & Qiimo - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Ballanqaadkayaga Ku Qancitaankaaga Oo Buuxda
La Soco Rajadaada
Muunad loo dirayo iibsadayaasha waa inay ku noolaadaan filashooyinkooda maadaama go'aankoodu ku xirnaan doono tayada tusaalahaas. At OEM markaad weydiiso muunad, dhagax kama tagi doonno si aan u hubino inaad heshay muunad tayo sare leh oo si fiican loo qaabeeyey.
Guud ahaan qiimaha ayaa kuxiran nooca dharka iyo farshaxanka badeecada. Markaan ka shaqeyno mashruuc naqshadeeyayaashayada iyo farsamoyaqaannadeennu waxay u muuqdaan inay hagaajinayaan dhammaan kharashyada si ay ula yimaadaan qiimayaal tartan u ah adiga.r macmiil).
Hagaajin iyo Soo-jeedin
Intii lagu guda jiray horumarinta mashruucyada waxaan sii eegeynaa liistada soo-jeedinta si aan u ogaano waxa horumarin ah ee lagu sameyn karo naqshadeynta alaabta si looga dhigo mid rafcaan leh oo la iibin karo.
Diiradeena ugu weyn waa inaan ka dhigno badeecadaada mid faa'iido leh (adiga) iyo tayo sare (macaamiisha).
Waxaan siinnaa macaamiisheenna xorriyad buuxda oo ay ku muujinayaan baahiyahooda iyo sheegista waxa ay raadinayaan markay yimaadaan OEM. Shirar dhowr ah ka dib waxaa la go'aamiyay in kharashka muunad qaaduhu uu yahay mid bilaash ah ama la soo celin karo.
Waxaan fahansanahay muhiimada ay leedahay sambal sameynta maadaama ay kaalin muhiim ah ka ciyaarayso go'aaminta qiimaha iyo tayada sheyga. Hadafkeenu waa inaan farsameyno shaybaarka iibka si fiican si markaa loogu dejin karo halbeeg wax soo saarka oo dhan. Waa qayb ka mid ah shaqada kooxdeena farsamo yaqaan si loo sameeyo liistada faallooyinka farsamada ee kooxda wax soo saarka. Waxaan sidoo kale ku darnaa iibka iyo kooxaha QC kulankeena soo saarida kahor kaas oo ay hogaaminayaan kooxda waxsoosaarka oo ujeedadiisu tahay barashada faahfaahinta amarkaaga iyo gaar ahaanshihiisa.
Khubaradu Waxay Talo Siinayaan Arrimaha Qiimaha
Uma baahnid inaad argagaxdid haddii ay kugu adkaato inaad la socoto qiimaha waxaadna ka walwalsan tahay inaad gaarto bartilmaameedkaaga.
Sanadihii la soo dhaafay, OEM waxay awood u yeelatay soo saarista bacaha ay leeyihiin fasallada oo dhan. Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan kaa caawino dhibaatooyinka qiimahaaga. Iyada oo la adeegsanayo nashqadeeyaasheena hibada leh iyo farsamayaqaanada waxaa macquul ah in la sahamiyo xulashooyin badan sida dhar kale, qalab iyo naqshado lagu xakameeyo qiimaha mashruucaaga.
Waxay noqon doontaa hal ku dhiggayaga inaan ku siino wax soo saar sida ugu wanaagsan u daboolaya baahiyahaaga.